Forum serasera malagasy Bare 2 ouganda 1 - Dinika forum.serasera.org
Bare 2 ouganda 1
Fitohizan'ny hafatra : Bare 2 ouganda 1
ravatorano - 18/05/2014 18:21
Sambany mba tsy hitenenana hoe "mba" nandresy ny ekipa nasionalitsika tamin ny foot anio tany mahajanaga.Za aloha raha nijery ilay lalao tamin ny TVM dia nahatsapa fa zakan dry zalahy ilay ougandais .
Ny baolina maty moa dia penalty matin i Faneva Ima raha nanao fahadisoana tamin ny lohalaharana Baggio ny vodilaharana vazaha mainty ougandé hihihih notsaraina ilay penalty ary tafiditra soa amantsara.
Ny baolina faharoa indray dia tolotra avy tao amin ny irakiraka rehefa niainga i Carlos sy nalalaka be ary dia nodakany mafy (ballon au ras du sol) dia tsy azon ilay mpiandry tsatokazo ka tafiditra soa amantsara.
Samy teo amin ny fidirana voalohany avokoa izany.
Maro be aza ny baolina tokony ho tafiditry ry zalah saingy nisy penalty iray aza tsy matin i Faneva Ima fa nihahotra ingahirainy teo ampandakana azy ka nisavoana ny baolina !
Ny baolina matin dry zareo Ougandais dia tamin ny fanalavam potona fidirana faharoa tany amin ny 94 em minute tany rehefa nidongy tany amin ny tanin ny malagasy ry zareo ka toitoafo ny ffanafihany dia natetika nanao fahadisoana ny vodilaharana ary nandray tanana tsy nahy tao amin ny surface dia nahazo penalty izay voatsara ry zareo.Vita izay dia tapitra ny baolina.
Arahabaina aloha ry zalahy fa naharesy ary dia nahafinaritra toa izany !